Ireo ny valiny voasivana an'ny Mediatek P60, puce iray izay ho kendrena amin'ny faritra afovoany ambony amin'ny Android | Androidsis
Ireo ny valin'ny sivana an'ny Mediatek P60, puce iray izay ho kendrena any amin'ny faritra afovoany ambony amin'ny Android
Ny orinasa Taiwanese Mediatek, manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana processeur sy semiconductors, niavaka tamin'ny ady tsy tapaka, saika mifanitsy amin'i Qualcomm, ny mpiara-miasa aminy amerikana, ny safidiny eny an-tsena amin'ny fisafidianana ireo mpikirakira azy avy amin'ireo mpanamboatra finday avo lenta toa an'i Xiaomi, Motorola, ary maro hafa.
Na dia marina aza izany Malaza be i Mediatek ankehitriny, mihabetsaka hatrany izy no taraiky ao amin'ny sehatry ny chipset avo lenta, na dia tsy dia be loatra aza ny eo anelanelany, toy ny amin'ny tranga P60, SoC izay misy tsipiriany vitsivitsy navoaka noho ny GeekBench Benchmark. Mampita ny vaovao aminao izahay!
Araka ny valiny navoakan'ity benchmark ity, ny Mediatek P60 dia mpifaninana matanjaka amin'ny Snapdragon 660, miaraka amin'ny hafainganana hafainganam-pandehan'ny famantaranandro sy ny isa mitovy isa, izay hanasongadinanay ny valo amin'ny hafainganana lehibe indrindra 1.99GHz, izay, amin'ny farany, dia ho fintina amin'ny 2GHz eo ho eo. Saingy tsy mitovy amin'ny SD660 fotsiny ny hafainganam-pandehany, fa koa ho an'ireo isa azo tao amin'ny GeekBench, izay, tao anatin'ny fotony tokana, dia nahazo isa 1.524 izy, ary, tao amin'ny fizarana multicore, isa 5.871, saika nitovy tamin'ny 1.599 sy 5.639 izay nahazo ny SoC avy amin'ny Qualcomm.
Ny fitsapana dia nanondro ihany koa fa natao tamin'ny RAM 3.787MB (4GB), ary Android 8.1 Oreo, ny tsimbadika farany an'ny Android ... Midika izany fa, araka ny efa noresahintsika teo aloha, dia hitodika any amin'ny elanelam-potoana avo lenta izy io, ary mety hifanaraka amin'ireo lafin-javatra roa ireo, saingy, amin'ny resaka RAM, angamba bebe kokoa .
Azontsika atao koa ny manasongadina ny anarany, izay manana anaram-bosotra MTK P60 MWC Demo, izay liana te hahafanta-javatra, satria mamela antsika hiandry raha ho aseho ao amin'ny Mobile World Congress any Barcelona ao amin'ny Mediatek stand, na raha kisendrasendra fotsiny io. Na inona izany na inona dia mila miandry fanamafisana na vaovao avy amin'ny orinasa Taiwanese izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ireo ny valin'ny sivana an'ny Mediatek P60, puce iray izay ho kendrena any amin'ny faritra afovoany ambony amin'ny Android
Huawei MateBook X Pro: Ny solosaina finday misy efijery tsy misy rafitra